China Active Ruzha Kudzora Tsika Yakagadzirwa Logo yakaderera moq gadzira kasque nzeve nhare ANC 808 Bluetooth Wireless Mahedhifoni Ane Microphone Kugadzira uye Fekitori | Yong Fang
Anoshanda Ruzha Kudzora Tsika Yakagadzirwa Logo yakaderera moq gadzira kasque nzeve nhare ANC 808 Makaralı Wireless Mahedhifoni Ane Microphone
Kukura Kwechigadzirwa: 175 (L) * 80 (W) * 200 (H) MM;
Bluetooth Solution: BK 3266 V5.0
Kugadziriswa kweANC: LM5896
Rutsigiro nhoroondo A2DP / AVRCP / HFP
Mutyairi unit: 40mm, 32ohm;
Kakawanda kupindura: 20Hz-20KHz;
Magetsi: 3.7V, 400mAh Lithium Bhatiri;
Simba kuburitsa: 35mW;
Ruzha rwekuderedza frequency renji: 40-600Hz;
Maximum Ruzha rwekuderedza Chikamu: 20 +/- 2dB;
Ruzha Kuderedza kwepakati frequency: kutenderedza 100Hz-300Hz;
Kushanda kure: 10Meters;
Kushanda maawa: kusvika ku10hours;
Chigadzirwa zita: ANC-808
【Active Noise Kanzura Kusvikira 18-22dB】Iyi ANC headphone inogona kushingairira ruzha rwezvakatipoteredza kuburikidza neanoshanda ruzha rwekudzima sisitimu yakavakirwa mukati meiyo nhare. Iyo yakagadzirirwa neFeed Forward ANC tekinoroji. Chikamu chekudzora ruzha chinobva pa18 dB kusvika 22 dB. Nekudaro, kana tiri mundiza, chitima, metro, kana kufamba munzira yeruzhinji kana kumashopu, uyu musoro weANC unogona kudzima ruzha uye nekukuitira nyika chaiyo;
【40mm neodymium simba bass driver】Iwo maspika eiyi headphone akagadzirwa zvichienderana neANC inotsigirwa acoustic edzimba dzimba. Inoburitsa bass rakasimba kwazvo nekristaro yakajeka kurira. Kana tikashandura basa reANC, iyo yekuteerera kana yekutaurirana chiitiko chichava chinoshamisa;
【Inogadziriswa Inogoneka & Chiedza Kurema Dhizaini】Iyi yekudzora ruzha headphone inowedzerwa kuti ikwane iwo misoro yemusoro yevashandisi vakasiyana. Uye, mahedhiyo anogona kupetwa mukati, ichi chinodonha chimiro ouinjiniya dhizaini inoita iyi isina waya headphone inogona kupetwa kuita zvidiki zvidiki. Iyo headphone inogadzira yakajeka uremu hwemhando yepurasitiki zvinhu uye super zvakapfava zvigadzirwa zveganda. Nekuita kudaro, iyi nhare isina waya haina huremu;
【Ramba Uchishanda Maawa gumi Pasina Kumira】Iko kune 400mAh rechargeable lithium bhatiri mukati mefoni. Kazhinji, inogona kushanda maawa gumi nemaviri pasina kumira. Kana ukachinja basa reANC, rinogona kushanda maawa gumi pasina kumira.
Yakagadzirirwa 3.5mm Aux Mune Socket】iyi isina waya nharembozha inogona kushandiswa seye waya yewadhi. Iyo yakagadzirirwa neyakajairwa universal 3.5mm odhiyo socket. Uye, kune yakawedzera 3.5mm kusvika 3.5mm tambo yekuteerera semidziyo yayo. Nekudaro, iyi isina waya bluetooth headphone inogona kushanda seyakajairwa wired pamusoro pese mumhanzi mumusoro musoro.
【Yakagadziriswa Zvishongedzo & Zvimwe zvekuwedzera】Kune iyi anc headset, izvo zvakajairwa zvishongedzo zvichave zvinokurumidza gwara, tambo yekuchaja tambo, odhiyo tambo, uye izvo zvekusarudzika zvishongedzo zvichave chinotakurika homwe uye inotakurika EVA kesi. Sezvo iri nharembozha isina waya inogona kudonha, kana ikauya nehombodo yakasarudzika kana yakagadziriswa evha kesi, zvingave zviri nyore kwatiri kuti titore chero kwatinoenda.
Pashure: Fashoni Dhizaini Tws Nharembozha Fekitori Chaiyo Kutengesa Yechokwadi Wireless Stereo Mhete dzeMusoro Nekubata Kudzora
Mvura Isina Mhepo Mahedhifoni
Wireless Makaralifoni mahedhifoni
Wireless mahedhifoni eApple
Wireless mahedhifoni eTv
Wireless mahedhifoni Ane Mic
Wireless Pane Nzeve Mahedhifoni
Kupinda Chikamu Chekuita Ruzha Kanzura Wireless Bl ...
OEM Tsika Rudziyo ANC Inonzwika Ruzha Yakakwira Quality Yakaderera ...